Tissue Box Factory | China Tissue Box mpanamboatra, mpamatsy
Boaty multifunctional LJ-1625
LONGSTAR boaty mivelatra multifunctional, vita amin'ny fitaovana avo lenta, izay mateza. Afaka mitahiry tsara, mety toy ny boaty fitahirizana amin'ny ankavia, ary ny iray mety ho toy ny boaty hozatra, dia tena ilaina amin'ny efitrano fandraisam-bahiny; Amin'izany dia ho madio sy madio kokoa izy io.
Boaty fitehirizana misy tahony (S) LJ-1667
Boaty fitahirizana LONGSTAR, vita amin'ny fitaovana avo lenta, izay mateza. Afaka mitahiry tsara, mandà tsy hikorontana; Miaraka amin'ny famolavolana fonosana, hisoroka ny loto; Miaraka amin'ny famolavolana tantanana, azo entina izy io, tena ilaina amin'ny fiainana andavanandro.
Boaty fitehirizana misy tantana (M) LJ-1668
Boaty fitehirizana misy tantana (L) LJ-1669
Boaty ho an'ny minion CH-6505
LONGSTAR Minions vata-kazo mahitsizoro, vita amin'ny fitaovana avo lenta, izay mateza. Amin'ny faritra malama izy io, mahatsiaro ho mahazo aina, mora koa ny manadio azy; Amin'izany dia mety ny mamoaka ny sela rehefa mila mampiasa azy. Miaraka amin'ny maodely minion dia toa velona sy mahafinaritra izy.
Boaty ho an'ny minion CH-6503
LONGSTAR Minions boaty vita amin'ny takelaka toradroa, vita amin'ny fitaovana avo lenta, izay mateza. Amin'ny faritra malama izy io, mahatsiaro ho mahazo aina, mora koa ny manadio azy; Amin'izany dia mety ny mamoaka ny sela rehefa mila mampiasa azy. Miaraka amin'ny maodely minion dia toa velona sy mahafinaritra izy.
Boaty ho an'ny minion CH-6506
Vokatra ： Minions boaty volo marika ： LONGSTAR Item no ： CH-6506 Fitaovana ： PP + PS MOQ ： 3000 pcs Vokatry ny vokatra ： φ13.4 * 13.5cm Vanja ny vokatra: 128g Vata feno boaty ： 60 pcs / CTN Master carton size: 68.5 * 41.5 * 54cm Style ： maharitra Ireo olona azo ampiharina ： Ny boatin-doko ho an'ny daholobe: tsy misy loko ： fotsy, mavo (azo namboarina) Toerana niaviany ： ZHEJIANG, taratasy fanamarinana CHINA ： LFGB, FDA, ISO9001, Tatitra momba ny fiarahamonina ISO14001 ： BSCI ， Starbucks, Wal-Martand , Boaty hozatra boribory Disney LONGSTAR Minions, vita amin'ny qualit avo ...
Vokatra ： boaty fanosotra marika Minions ： LONGSTAR Item no ： CH-6503 Fitaovana ： PP + PS MOQ ： 3000 pcs Vokatry ny vokatra ： 17.4 * 12.5 * 9.7cm Lanjan'ny vokatra ： 132g Vata carton ： 45pcs / CTN Master carton size: 53.5 * 38.5 * 49cm Style ： maharitra Ireo olona azo ampiharina ： Ny boatin-doko ho an'ny daholobe: tsy misy loko ： fotsy, mavo (azo namboarina) Toerana niaviany ： ZHEJIANG, taratasy fanamarinana CHINA ： LFGB, FDA, ISO9001, Tatitra momba ny fiarahamonina ISO14001 ： BSCI ， Starbucks, Wal-Martand , Disney LONGSTAR Minions square square box, dia vita amin'ny qu ...
Manamboatra boatin-drakitra miendrika modely
Famaritana ny famaritanaNy vokatra: LJ-0872 anarana: Weave patterned tissue box Material: PP fonosana isa: 1 × 36 ihany ny haben'ny vokatra: 22.5 * 14.5 * 9.5cm haben'ny carton: 68 * 45 * 40cm lanja net: 183g / a Barcode: 6922286925393
Dispenser Roll Toilet tsy tantera-drano
Famaritana famaritanaNy vokatra: L-238 anarana: Waterproof Toilet Roll Dispenser Material: AS, ABS fonosana isa: 1 × 24 ihany ny haben'ny vokatra: 18.5 * 16.5 * 12.5cm haben'ny boaty: 69.5 * 39.5 * 45cm lanja net: 305g / a Barcode: 6922268982167
Ny fiainana miafina an'ny boaty
Famaritana famaritanaNy laharana: AC-6233 anarana: Fiainana miafina momba ny sakafom-biby anaty akata Tissue Material: PP Isa fonosana: 45 Vokatry ny vokatra: Tsy misy haben'ny boaty: 53.5 * 38.5 * 49cm Lanja net: 132g / ihany Barcode: 6922228298201
Ny fiainana miafina an'ny boaty boribory
Famaritana famaritanaNy vokatra: AC-6236 Anaran'ny vokatra: Ny fiainana miafina amin'ny alàlan'ny biby fiompy Tissue Box fitaovana: PP Isa fonosana: 60 Vokatry ny vokatra: Tsy misy haben'ny carton: 67.5 * 41 * 50.5cm Lanjam-bidy: 129g / code bar fotsiny: 6922286938225